कोरोना संक्रमित भेटिएको सूचना सरकारले यसरी लुकायो, गम्भीर महामारीको खतरा !::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
काठमाडौं – सञ्चारमाध्यमहरूबाट बुधवार दिउँसो खबर फैलियो – मुलुकभित्रै तेस्रो व्यक्तिमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणको पुष्टि ।
तर अनलाइनहरूमा मुख्य समाचार बनिसक्दासम्म पनि शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, टेकुमा कार्यरत चिकित्सकलाई मात्र हैन, निर्देशकलाई समेत त्यसबारे पत्तो थिएन । जबकि संक्रमित बिरामी त्यहीँ अस्पतालको आइसोलेसन वार्डमा उपचाररत छन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
बिरामीमा कोभिड–१९ संक्रमण देखिएको सूचना बाहिरिएलगत्तै त्यसबारे बुझ्न उक्त अस्पतालका निर्देशक डा. सागरकुमार राजभण्डारीलाई कान्तिपुरले सम्पर्क गर्दा उनले अनभिज्ञता जनाए ।
‘हामीले उपचार गरिरहेको बिरामी, हामीलाई नै रिपोर्ट आएको छैन,’ उनले भने, ‘यहाँ डाक्टरहरू सबैले मलाई कराइरहेका छन् । मैले के जवाफ दिने ?’
दुवैको जवाफबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयका विभागहरूबीच अहिलेको विषम परिस्थितिमा पनि राम्रो समन्वय नरहेको प्रस्टै बुझिन्थ्यो । मन्त्रालयका यस्तै कमजोरीबीच स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले अपराह्न ४ः१५ बजे पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिए – एयर अरेबियाको फ्लाइट नम्बर जी–९५३७ मार्फत यूएईबाट आएका व्यक्तिमा कोभिड–१९ को संक्रमण देखियो । पत्रकार सम्मेलनमा उनले अब सबै संयन्त्र ‘चेन अफ कमान्ड’का आधारमा चल्ने र त्यसलाई सबैले मान्नुपर्ने पनि बताए ।
चिकित्सकहरूले भने संक्रमित व्यक्तिबारे मन्त्रालयले १४ घण्टाभन्दा बढी सूचना लुकाएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । ‘ती व्यक्ति संक्रमित रहेको कुरा हिजो मंगलवार राति नै मन्त्रालय लगायतलाई थाहा रहेछ, तर हामी उपचारमा संलग्न चिकित्सकले बुधवार साँझ मात्र सञ्चार माध्यमबाट थाहा पायौं,’ टेकु अस्पतालका डा. राजेश साहले भने, ‘बिरामीको उपचारमा संलग्न चिकित्साकर्मीसँग संक्रमणको स्थिति लुकाउँदा ठूलो दुर्घटना हुन सक्ने अवस्था छ ।’
टेकु अस्पतालका चिकित्साकर्मीले बुधबारै आफ्ना निर्देशक डा. राजभण्डारीलाई भेटेर बिरामीको अवस्थाबारे जानकारी लुकाउने काम भए उपचार प्रक्रिया नै छोड्ने चेतावनी दिएका छन् । जवाफमा डा. भण्डारीले आफूलाई पनि ती बिरामी संक्रमित रहेको जानकारी नरहेको चिकित्साकर्मीहरूलाई बताएका थिए ।
‘राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले कुनै व्यक्तिको कोभिड–१९ रिपोर्ट पोजेटिभ आउनेबित्तिकै इपिडिमियोलजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखालाई जानकारी दिनुपर्ने हो । त्यसले तुरुन्तै हामीलाई सूचित गर्नुपर्ने हो,’ डा. राजभण्डारीले भने । तर जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई कोभिड–१९ देखिएको रिपोर्ट अस्पताललाई नदिई सिधै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाउन लगाइँदा यसअघि पनि यस्तै समस्या देखिएको उनले जनाए ।
बुधवारको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री ढकालले बढीमा तीन दिनभित्र सरकारले पीपीई (पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्युपमेन्ट) लगायतका चिकित्सा सामग्री विदेशबाट आउने जनाए । उनले यस्तो जानकारी दिए पनि सरकारले खरिदका लागि आह्वान गरेको बोलपत्रमा भने कसैले इच्छा प्रकट नगरेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
सरकारले कोभिड–१९ को उपचारका लागि प्रमुख रूपमा तोकेको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा पीपीई नै छैन भने हुन्छ । अस्पताल स्रोतका अनुसार चिकित्सकहरूले हालसम्म जेनतेन बिरामी जाँच गरिरहेका भए पनि संक्रमितको संख्या बढे गम्भीर समस्या निम्तिने अवस्था छ । पीपीई विना डाक्टरहरू कोरोना संक्रमितको उपचारमा संलग्न हुन सम्भव हुन्न ।
अस्पतालमा कार्यरत एक चिकित्सकका अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्डका आधारमा प्रयोग गर्ने हो भने अहिले मौज्दात पीपीईले २–४ दिन धान्न पनि मुस्किल छ । ‘अहिले त खासमा चिकित्सकहरूले मात्रै प्रयोग गरिरहेका छौं । भोलि बिरामी बढेको खण्डमा अरू स्टाफहरूका लागि पनि पीपीई चाहिन्छ, त्यस्तोमा कसरी व्यवस्था हुन्छ भनेर चिन्तित छौं,’ उनले भने ।
पीपीईलगायत सामग्री आपूर्ति नहुँदै संक्रमितको संख्या बढे सीमित सरकारी तथा निजी अस्पतालले केही दिन सेवा दिए पनि त्यसलाई निरन्तरता दिन मुस्किल पर्ने चिकित्सक बताउँछन् । सरकारले लकडाउन गरेर स्थिति नियन्त्रण गर्न खोजे पनि कतारलगायत विश्वका विभिन्न कुनाबाट स्वदेश भित्रिएका नेपालीले होम क्वारेन्टाइनको नियम नमानेकाले संक्रमितहरूको संख्या बढ्न सक्ने उनीहरूले बताए ।
जनस्वास्थ्यविद् तथा विज्ञ चिकित्सकले कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रण गर्नका लागि धेरैभन्दा धेरै परीक्षण गर्नुपर्ने सुझाव दिए पनि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले पछिल्ला २ दिनमा ७७ वटा मात्रै नमूना परीक्षण गरेको छ । हालसम्म प्रयोगशालाले ६८७ नमुना परीक्षण गरेको छ, तीमध्ये तीन जनामा संक्रमण रहेको पुष्टि भएको हो ।
स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले लकडाउनका कारण नमुनाहरू काठमाडौं ल्याइपुर्‍याउन मुस्किल भएकाले छिट्टै पूर्वमा धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पनि नमुना परीक्षण गरिने जानकारी दिएका छन् । पश्चिमबाट भने नेपालगन्जमा नमूना संकलन गरेर बेलुका विमानबाट ल्याइने बताएका छन् । काठमाडौंबाट तीनरचार घण्टाको दूरीमा रहेको स्थानबाट एम्बुलेन्समा नमुना ल्याइने उनले जनाए । उनले परीक्षणको दायरा किन नबढाइएको हो भन्ने विषयमा भने केही बोलेनन् ।